Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်)
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Moriamin Forte ကို အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်မှာ
ကိုယ်ခန္ဓါတွင် ပရိုတင်းနည်းခြင်း၊ ဗီတာမင်နည်းခြင်း၊ အာဟာရများ ညီမျှမှု မရှိခြင်း
သွေးအတွင်း albumin နည်းခြင်း
ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်နဲ့ အခြားဒြပ်စင်များ လိုအပ်မှု များပြားခြင်း (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်ချိန်တွင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပြင်းထန်စွာ လှုပ်ရှားမှုများ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ ကလေးများ ဖွံဖြိုးမှု အချိန်တွင် အစာမညီမျှမှုများ)
Moriamin Forte ကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ပျောက်ကင်းစေရန်နဲ့ ခွဲစိတ်ပြီးချိန်တွေမှာ ကိုယ်ခန္ဓါကို ပြန်လည် အားဖြည့်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Moriamin Forte ကို သင့်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆေးပမာဏကို အတိအကျသိရှိရန် ဆေးပေါ်ရှိ အညွှန်းကို သေချာ ဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Moriamin Forte ကို မှောင်ပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာမှာ သိမ်းဆည်းသင့်ပါတယ်။ အပူချိန်ဟာ ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မကျော်သင့်ပါဘူး။ Shelf life (သက်တမ်း) က သုံးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Moriamin Forte မှာ မသုံးသင့်တဲ့ အခြေအနေမရှိပေမယ့် ဆီးချိုရှိရင်တော့ သတိထားပြီး သုံးသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ အောက်ဖေါ်ပြပါအချက်တွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ
ဘယ်ဆေးတွေက Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Moriamin Forte နဲ့ အောက်ဖေါ်ပြပါ ဆေးဝါးတွေဟာ ဓါတ်ပြုမှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Barbiturates, salicylates, sulfonamides တွေကို စွန့်ထုတ်နှုန်း နှေးကွေးစေပါတယ်။
အတက် ပျောက်ဆေး: increase metabolism and excretion of ergocalciferol in the bile;
Cardiac glycosides: သွေးအတွင်းမှာ ကယ်လ်ဆီရမ် များစေပါတယ်။
Kolestiramin, laxatives containing mineral oil: ဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ အီး စုပ်ယူမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
Methotrexate, pyrimethamine, trimethoprim, sulfasalazine, triamterene, antiepileptic drugs: Folic acid စုပ်ယူမှုကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
Isoniazid: pyroxine ရဲ့ အစွမ်းထက်မှု လျော့ကျစေပါတယ်။
Biguanides: cyanocobalamin စုပ်ယူမှု နည်းပါးစေပါတယ်။
Isoniazid, Penicillamine: ဗီတာမင် B1 စွန့်ထုတ်မှုများစေပြီးတော့ အစွမ်းထက်မှု နည်းပါးစေပါတယ်။
Fluorouracil, bleomycin, vinblastine, cisplatin: ဗီတာမင် A, B1, B6 တို့ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်ခြင်းကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေဟာ ဗီတာမင် အေ၊ စီ ပမာဏကိုများစေပြီးတော့ folic acid ပမာဏကို နည်းစေပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Moriamin Forte က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Moriamin Forte ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ – တစ်လုံး (သို့) နှစ်လုံး, သောက်ရန်, တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ကနေ သုံးကြိမ်အထိ
ကလေးတွေအတွက် Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေး – တစ်နေ့ ၁လုံးကနေ ၃လုံး (ဆေးလုံး)
Moriamin Forte (မော်ရီရာမင်း ဖို့ဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Moriamin Forte ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Moriamin Forte သောက်ဆေးမှာ အောက်ပါအရာများ ပါဝင်ပါတယ်။
oxyanthranilic acid 0.2 mg, Ca pantothenate5mg, folic acid 0.2 mg, L-isoleucine 5.9 mg, L-acetyltryptophan5mg, L-leucine 18.3 mg, L-lysine HCl 25 mg, L-methionine 18.4 mg, nicotinamide 20 mg, L-phenylalanine5mg, L-threonine 4.2 mg, L-valine 6.7 mg, vit A 2,000 IU, vit B15mg, vit B12 1 mcg, vit B23mg, vit B6 2.5 mg, vit C 20 mg, vit D 200 IU, vit E 1 mg
ယေဘူယျအသိပေးချက် – အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အရေးပေါ်ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသမှုခံယူပါ
ယေဘူယျအသိပေးချက် – Moriamin Forte ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Moriamin Forte Forte, http://en.remedy-info.com/ovr0_Moriamin Forte-forte.html Accessed November 2nd, 2016
Moriamin Forte Forte, http://www.mims.com/philippines/drug/info/Moriamin Forte%20forte Accessed November 2nd, 2016
Moriamin Forte Forte - instruction , application reviews, http://vitamedd.com/en/pages/1342029 Accessed November 2nd, 2016
Moriamin Forte Forte, http://noillen.bitballoon.com/medicine2/Moriamin Forte-forte- instr1555 Accessed